ग्रामीण पर्यटनको उजागर नै मेरो प्राथमिकता- दिपक दाहाल - ParyatanBazar.com
ग्रामीण पर्यटनको उजागर नै मेरो प्राथमिकता- दिपक दाहाल
फागुन २४, काठमाण्डौ। गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च (भिटोफ नेपाल) को २४ औँ साधारण सभा सहितको निर्वाचन यही चैत्र २० गते राजधानीमा हुने तय भएको छ। मुलुक भित्रका ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रलाई उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण खेल्दै आएको भिटोफको आगामी अध्यक्षको रूपमा आकाङ्क्षीहरू मैदानमा उत्रिरहँदा वर्तमान भिटोफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष दीपक दाहालको नाम चर्चामा छ।
पर्यटन क्षेत्रमा विगत १६ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै देशको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रलाई देश विदेशमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको एक चिर परिचित नाम हो दीपक दाहाल ! सुरुमा ट्रेकिङ भरिया, ट्रेकिङ गाइड हुँदै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दीपक आफू टुरिजमको नभई मेडिकल (प्याथोलोजी ल्याब टेक्निसियन)को विद्यार्थी रहेको बताउनु भयो। वर्तमान भिटोफ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष दीपक दाहाल लाइभ नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स र सऊलफुल नेपाल टेक एन्ड एक्पिडीसन प्रा•लि का संस्थापक समेत हुनुहुन्छ । धादिङ जिल्ला, गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा न ७ घर भई हाल वनस्थली काठमाडौँ बस्दै आउनुभएको दीपक दाहालले आफू यस पटक भिटोफ नेपालको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी मैदानमा उत्रिसकेको बताउनु भयो। प्रस्तुत छ वहाँसँगको कुराकानी:
किन तपाइको उम्मेदवारी ?
विगत साढे छ वर्षदेखि म भिटोफ नेपालको कार्यसमितिमा रहेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु। जसको फलस्वरूप भिटोफको हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने मौका मिल्यो। ऐले सम्म भिटोफ नेपालले गाउँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि धेरै राम्रा कामहरू गरिसकेको छ तर अझै केही त्यस्ता कामहरू बाकि छ जुन अबको नेतृत्वले गर्नु पर्ने हुन्छ हो त्यही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने अवसर चाही म आफैलाई दिन चाहन्छु त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिएको हु।
महत्त्वपूर्ण कामहरू भन्नाले ?
नेपाल सरकारले भिटोफ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अरूको भन्दा फरक छ खास्सै चिन्दैन सरकारले भिटोफ नेपाललाई त्यही फरक दृष्टिकोण लाई हटाउन, गाउँ पर्यटन र सरकारको नयाँ खाले सम्बन्धको स्थापना गर्न र जति पनि पर्यटकीय स्थलहरू छन् हिमाल, खोला, झरना त्यसै गाउँ र मौलिकता पनि पर्यटनको अपरिहार्य अङ्ग हो है भन्ने चेतना सरकारमा वृद्धि गरी राज्य र पर्यटन बोर्ड सँग सहकार्य गरेर नेपालाको दूर दराजमा पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेर पनि अझै चर्चामा नआएको गाउँहरूलाई प्रवर्धन गर्नु हो।
कस्ता कस्ता योजनाहरू छन् त तपाईँ सँग ?
नेपालमा छायामा परेका अझै धेरै गाउँ गन्तव्यहरू छन्। जहाँको मौलिकता, संस्कृति, रहनसहन र भेषभुषाले त्यस गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ। कतिपय गाउँहरू त आजसम्म मिडियामा आएकै छैनन् यिनै दूर दराजका पर्यटकीय बस्तीहरूलाई जनमानस समक्ष, मिडिया समक्ष र देश विदेश पुर्याउनु नै मेरो मुख्य एजेन्डा रहेको छ। जसमा आवश्यकता घर बासका ट्रेनिङ हरू देखि लिएर प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू समेत उल्लेखनीय तरिकाबाट गर्नेछु। साथै पर्यटकहरूलाई गाउँ समक्ष पुर्याउने र गाउँको उत्पादनलाई पर्यटकमाझ ल्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु।
कोरोनाले थिलथिलो बनाएको गाउँ पर्यटन अब कसरी उकालो लाग्ला त ?
कोरोनाले गर्दा गाउँ पर्यटन लगायत समस्त पर्यटन क्षेत्र नै थिलथिलो भएको छ।अझै सम्म कोमा मै छ पर्यटन क्षेत्र। सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्र लाई मारमा पर्ने काम मात्र गरेको छ। यतिको सहज बातावरण सिर्जना हुँदा सम्म पनि अझै पर्यटकको लागि अनुमति दिएको छैन। हामी धेरै पर्यटकीय सङ्घसंस्था हरू मिलेर सरकार लाई अन अराइभल भिसा दिनपर्यो। सरकारले पर्यटकलाई एयरपोर्ट सम्म आउने वातावरण मिलाइदिने हो भने हामी ती पर्यटकलाई गाउँ गाउँमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछौ। हरेक गाउँ पर्यटकीय ठाउँ भन्ने मुख्य कुरालाई आधार मानेर हामीले जल जमिन र जङ्गलले भरिपूर्ण गाउँ पर्यटनलाई आकर्षक ढङ्गले पर्यटकमाझ पस्कने छौ। साथै आन्तरिक पर्यटकलाई समेत गाउँ गाउँमा पुग्न उत्प्रेरित गर्ने छौ।
तपाईँलाई भोट हाल्न अन्योलमा भएकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भिटोफ नेपालको कार्यसमितिका सदस्य, अध्यक्ष लगायत सबैलाई थाहै छ म विगत ६ बर्सदेखि भिटोफ नेपालको सक्रिय सदस्य हु। नेपाल सरकार लगायत पर्यटन बोर्ड, गाउँ र पर्यटकहरू सँगको प्रत्यक्ष संसर्गमा भएको कारण गाउँ पर्यटनलाई उजागर गर्न मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। गाउँ पर्यटनलाई नजिकबाट नियालेको छु । यसर्थमा यस क्षेत्रको विकासको लागि मेरो विकल्प छैन ।